Kuyingozi empilweni ukuthanda imali ngokweqile - Bayede News
IBAYEDE noShuter and Shooter kunqabakutholwa
Iqiniso elingephikiswe ngelokuthi akekho umuntu ongayithandi imali, kumbe ongafisi ukuba nayo. Wonke umuntu usemkhankasweni wokufuna imali. Okwenza lokho wukuthi sekucacile ukuthi yonke into edingekayo empilweni idinga imali. Imali ngokwayo iyashibilika iphele ngokushesha uma ingakhelwe phezu kwesisekelo somnotho.
Ngangisemncane ngifunda ebangeni eliphansi ngenkathi kufika izimoto zoMnyango Wezempilo zizosigoma ukuba singangenwa wumkhuhlane wohlobo oluthile. Kwaze kwaba kabili sibhekana nalesi simo sisebancane. Owokuqala umjovo engiwukhumbulayo eminyakeni ye-1960 babewubiza ngomnokoloto, owawenziwa mamaphezulu nengalo, eduze kwehlombe. Owayesinokolota wayesiklwebha ezindaweni ezintathu bese egcoba umuthi wokugoma. Owesibili umjovo nawo wawenziwa phezulu nengalo, kodwa-ke wona wawucishe ufane nesigxivizo. Kwakuthi uma esewenzile kusale izimbotshana eziyisiyingi ezivulekile ukwamukela umshanguzo wokugoma. Emva kokunokolotwa bakhona ababeba nezinkinga kubhibhe kube yisilonda lapho kuklwejwe kwafakwa khona umuthi. Kwakungabi yisimanga esitheni, ngoba kwakuye kwelashwe ngandlela thile kuphele. Kwakwenzeka kube nezinkulumo eziwubeka lo mgomo njengetulo lokubulala aboHlanga, kuthiwa abawenqabe lo mjovo.
Engithanda ukukuphawula ngalesi sikhathi engisichaza ngenhla ukuthi kwakungakasicaceli ukuthi umjovo lona uyimali kulowo owusungulile. Futhi kwakungakabi yinto enkulu kangaka ukuthi ophethe umjovo uphethe amandla okuphatha umhlaba. Kungenzeka futhi ukuthi imali yayingakafiki ezingeni ekulo namuhla, lapho ibonakala inikeza onayo amandla edlulele. Ubunikazi babungakagcizelelwa kangako ukuthi lowo okusetshenziswe owakhe umjovo angagcina eyimpunyela ezedlula zonke ezinye izimpunyela. Ngicabanga ukuthi ukwelapha kwakuthathwa njengokwelapha, kungeyona indlela yokuzicebisa.
Kubukeka seziguquke kakhulu izinto, lapho kukhona amazwe athathwa njengahamba phambili ekukhipheni imishanguzo nemijovo ethembekile. Lawo mazwe athathwa njengamancane angathuthukile azithola encenga kulawa athathwa njengamabhoklolo ukuze asizakale nawo. Lokhu kwenzeka kakhulu kumazwe ase-Afrika enganyelwe ngabaholi abangaboHlanga. Ngemuva kwawo wonke lo mshikashika kugcina kucaca ukuthi akukhulunywa nje ngomjovo wokuphilisa abantu, kodwa sekukhulunywa ngomnotho nangokuphatha. Akugcini kukhuluma abaholi bemibuso kodwa kutholakala amagama ezimpunyela ezidla izambane likapondo, ezicaphuna kusale, sekuyizo eziphawula ngokuthunyelwa kwemishanguzo emazweni okuthiwa ayahlupheka. Uma uthathwa njengesihlupheki, bagcina bekuthathela izinqumo, kube sengathi bayakudabukela, kanti bathi lala lulaza sikwengule. Yinde futhi ibanzi le ndlela yomnotho.
Ubugovu nokuthanda imali kakhulu kugcina kuhlasela isimilo somuntu, ikakhulukazi uma ezithola esezingeni lokulawula nokuphatha. Kuyenzeka umsebenzi oqale umuhle woniwe wubugovu nokwenza izinto ngendlela enobugebengu ephambanayo nendlela okuqhutshwa ngayo ibhizinisi. Kuba nzima kakhulu uma kuleso simo esinobugebengu nokulahleka kwesimilo kugcina kugaxela ipolitiki. Ipolitiki yona izinto ngoba kuvamise ukuba ipolitiki yomnotho kube yiyo ethatha uholo, ilawule ukwenzeka kwezinto emhlabeni nalapho bekungadingekile khona. Uma-ke impilo seyilawulwa yipolitiki yezomnotho, aboHlanga nemibuso yabo bagcina belandela ngemuva balawulwe ngongxiwankulu. Uma sekunjalo, amanzi ayadungeka, kugcine kungaselula ukwehlukanisa phakathi kwenhloko nesixhanti. Ngokwehla kwesimilo kubaholi umgomo wempilo uyalahleka, kuvumbuke ukuthanda ukuzicebisa nokuthanda kakhulu imali bese kuyayiphambanisa indlela yokuphila kwenze abantu bagcine beyizisulu zosopolitiki nongxowankulu, abangenazwelo kubantu abantulayo.
Kulesi sikhathi ukhuvethe lubuye ngamandla, ludla lubi, lusho ukuqeda abantu ngaphandle kokukhetha, futhi alubaniki ithuba lokwenza imizamo yokuzelapha. Ithemba labantu wumjovo othenjiswayo ukugoma okuzokwenza igciwane lingazenzeli umathanda emizimbeni yabantu. Wonke amazwe acula iculo elilodwa lokutholakala komjovo ozokwehlisa isivinini sokufa kwabantu.
Kunezinkulumo eziningi ezifaka ingebhe kubantu mayelana nomjovo ozovikela abantu emhlabeni kulolu khuvethe. Noma kukhulunywa ngokwelapheka kwabantu, okuzwakala ezinkulumweni yimali yokuthenga lo mjovo kanye nokwethembeka kwalapho uthengwa khona. Abanye sebesaba ngisho ukuzwa igama elithi Bill Gates ngoba baleyamanisa nomjovo othile owesatshwayo. UMnu uBill Gates, owaduma kakhulu ngokusungula izinhlelo zekhompyutha, uyisigwili esifaka izimali emikhankasweni yokufukula izinhlelo emazweni okuthiwa asathuthuka. Nakulolu hlelo lokukhiqizwa komjovo uyathinteka kakhulu.
Kubhekwe ngabovu ukufika komjovo eNingizimu Afrika, kukhulunywa ngendlela ozokwabiwa ngayo ukuze ufinyelele kwabaningi ngesikhathi esifushane. Singafunda okukhulu kulolu bhubhane, njengokuthi njengezwe siyadinga ukuthuthukisa izinhlelo zokucwaninga okujulile kwezempilo. Sisenomsebenzi omkhulu ukuze leli lizwe libe ngelizimele, libe nezinhlelo eziqinile zokuvikela izakhamuzi zalo.
nguLindani Dhlomo Jan 22, 2021